Nei Apple isingatenderi muzinga paIOS? | IPhone nhau
Ignacio Sala | | Noticias, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Gore rakapera, iyo Unicode Consortium, iyo kambani inotarisira dhizaini uye kugadzirwa kweakakurumbira emojis atinoshandisa zvisingaite mazuva ese, yakazivisa kuumbwa kwema 250 emojis matsva, kusanganisira muzinga wakakurumbira, Spock's Vulcan salute, kaseti yetepi ... Dzakati wandei dzeemojis dzakasvika mune iyo iOS yekuvandudza senge kukwazisa kwaSpock kwaVulcan, nepo vamwe vakaita seuyo ane muzinga havasati vamboonekwa papuratifomu yevakomana veCupertino.
Kwemaawa mashoma Vashandisi veWhatsApp Android vanogona kushandisa muzinga wakakurumbira pamidziyo yavo sekureba senge yazvino vhezheni, muchikamu chebeta, yechishandiswa inotorwa pasi zvakananga kubva pawebhusaiti yeWhatsApp. Iyo beta yeinotevera vhezheni yeWhatsApp yeIOS haitipe isu muzinga, sekuona kwandinoshanda naye Luis Padilla.
Zvakanakira kuve ne "yakavhurika" sisitimu yekushandisa senge Android, ndeyekuti vanogadzira vanogona kuwedzera mabasa, mukati memiganhu, mune avo mashandisiro hapana chikonzero chekupfuudza iyo yakaoma Google Play firita. Muchiitiko cheiyo iOS chikuva chakasiyana zvachose. Emoji dzatinogona kushandisa pane yedu iPhone dzinotsanangurwa neApple. Ndokunge, kana Apple ichida kuwedzera imwe emoticon pane emoji keyboard, tinogona kuishandisa, zvikasadaro ichave iri basa risingabviri.
Imwe sarudzo yataizoshandisa kushandisa muzinga pane yedu iPhone kwaizove kuisa kiyibhodhi iyo yaive yaisanganisira, asi zviri pachena kuti Apple yakanyatso chengetedza chechitatu-bato kirabhu iyo yatinogona kushandisa pane yedu kifaa. Nei tisingakwanise kushandisa kamu pane iOS? KuApple ivo vane puritanical chaizvo uye vanozofunga kuti iyi emoticon inogumbura inogona kushandiswa kutyisidzira kana kutyisidzira vashandisi. Ndiyo chete tsananguro yandingafunge nezvayo kutsanangura chikonzero nei gore mushure mekuwanikwa, kusvikira nhasi harisati raverengerwa mune yazvino emoticon update iyo iOS 8.3 yakaunzwa.
Mukushaikwa kwechingwa, akanaka makeke. Pese pandinotaura nezveWhatsApp ndinopedzisira ndotaura nezveTeregiramu. Teregiramu inotibvumidza kuti tibvumirane nekutaurirana kwedu nekuwedzera zvimisikidzo. Iwo matikiti anoratidzwa pane ese madhijitari ane Teregiramu yakaiswa zvisinei neshanduro yavanoshandisa. Apo Apple yakaburitsa iOS 8.3 nemasikisi matsva, vashandisi chete vaive neiyi vhezheni yakaiswa ndivo vaigona kushandisa uye kuona iwo maemaikoni. NaTeregiramu izvo hazviitike.
Kana iwe uchida kupfuudza ako ese maonana kamwe uye zvachose kune Teregiramu, heino vhidhiyo kwandinokuratidza maitiro atinogona kugadzira edu ekunamatira kuTeregiramu. Zvimanamiti izvo zvinotungamira mufananidzo weichi posvo ndechimwe chezvangu zvandinoda uye zvandinoshandisa zvakanyanya paTeregiramu, pakushaikwa komichi yepamutemo, zvitambi zvine muzinga uye zvakakura kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Nei Apple isingatenderi muzinga paIOS?
Alejandro Jesu Moreno Ferro akadaro
Vagadziri vanogona kumisa zvisina maturo uye kugadzirisa dambudziko rekuyananisa raibhurari yemumhanzi yeicloud kana ichibatana neiyo yaimbove nemumhanzi weapuro, ini handidi kufunga kuti inogona kunge iri maneja kuitira kuti mimhanzi yese terminal inouya kubva kumumhanzi weapuro… ..
Pindura kuna Alejandro Jesu Moreno Ferro
Yakareba rarama Teregiramu
Kana iyo iPhone 6 Plus ichirarama mazuva makumi mashanu nemana pasi penyanza